आज साेच्नै नसक्ने गरी ह्वात्तै…. सुनकाे भाउ, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ? – Jagaran Nepal
Jagaran Nepal सोमबार, कार्तिक २४, २०७७
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ आज फेरि बढेको छ । आइतबार सुनको भाउ तोलामा ९७ हजार ७ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ५ सयले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ९८ हजार २ सय कायम गरिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९७ हजार ७ रहेको छ ।
त्यस्तै, आज चाँदीको भाउ प्रतितोला १२८५ रहेको महासंघले जनाएको छ । तर आइतबार चाँदीको भाउ प्रतितोला १२७५ मा कारोबार भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेसः १ लाख रुपैयाँ नाघेको सुनको मूल्य ७५ हजारमा झर्ने
दोस्रो कुरा एक वर्ष भित्र ५० प्रतिशत भन्दा बढीले सुनको मूल्य बढेको छ । यो अस्वभाविक हो । गत वर्ष ६० देखि ६५ हजार रूपैयाँ प्रतितोला रहेको सुनको भाउ अहिले एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ । चाहेर पनि मानिसले किन्न सक्ने अवस्था छैन ।
मानिसको क्रयशक्ति नै गुमेका कारण अहिले सुनका गरगहनाप्रति मानिसको इच्छा, आकांक्षा नै हराएको पूर्व अध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो । ६ महिना भयो व्यापारीले सुनको व्यापार गर्न सकेका छैनन् । अहिले सुन व्यापार गर्ने कुरा परै जाओस, ज्यान जोगाएर व्यापार व्यवसाय पछि गरौला भन्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु छन् । भ्याक्सिन नै पत्ता लागेमा पनि कोरोना भाइरसको असर अझै ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
-janatasamachar बाट साभार
याे पनि पढ्नुहाेसः वैज्ञानिकले गरे संसारको अन्त्य हुने मिति घोषणा
एजेन्सी । सन २०२० मा सम्पूर्ण विश्वले धेरै कठिनाइहरूको सामना गरिरहेको छ । साही बेला एक वैज्ञानिकले संसारको विनाशको लागि मिति घोषणा गरेका छन। म्याट क्यापलान नाम गरेका वैज्ञानिकले यो संसार सत्यमा अन्त हुने दाबी गरेका छन। संसारको अन्त्य हुनु अघिको के परिवर्तनहरू पनि आउँनेछ सो कुरा पनि बताएका छन ।
ती वैज्ञानिकले भने– –जब संसारको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँ प्रशस्त चिसो हुनेछ। अन्तरिक्षमा एक मात्र पनि तातो तारा हुनेछैन र सबै चीज अन्त्य हुनेछ।’ सैद्धांतिक भौतिकशास्त्री म्याट क्यापलानले संसारको अन्त्य हुने समयको बारेमा पत्ता लगाएका छन, उनले डाटा र ताराहरूको गणनाका आधारमा यो भविष्यवाणी गरेका हुन्।
इलिनोइस स्टेट युनिवर्सिटीका भौतिक विज्ञानका सहायक प्राध्यापक, म्याट क्यापलानले अन्तरिक्षको आन्दोलनको अध्ययन गरे र संसारको अन्त्य हुने समय पत्ता लगाएका हुन ।
म्याट क्यापलानले भविष्यवाणी गरे कि ब्रह्माण्डको अन्त्य हुनेछ जब कालो बौना तारालाई अन्तिम सुपरनोवा हुनेछ। यो अन्तिम स्टार हुनेछ, जुन अन्तरिक्षमा अन्त्य हुनेछ। तर अहिले धेरै सय बर्ष भयो।
म्याट कप्लान आफ्नो खोज अन्वेषणबाट मृत ताराहरू समयसंग कसरी परिवर्तन हुनेछ भनेर गणना गरेका थिए। उही समयमा, उनले भने– ‘सूर्यले भाँचेको अन्तिम तारा समाप्त भएपछि पृथ्वी पनि अन्त हुनेछ। यसलाई अन्त हुन अरबौं वर्ष लाग्छ।’
जब ब्रह्माण्डको अन्त्य भएपछि यो चिसो र एक्लो ठाउँ हुनेछ, जसमा प्रायः कालो प्वाल र जलेका ताराहरू हुने उनले बताए। सुपरनोवामा सबैभन्दा ठूला ताराहरू देखा पर्दछ जब यसको केन्द्रमा फलामको गठनले यसको पतन गराउँछ जबकि सानो ताराहरू बिस्तारै हराउँछन् जब तिनीहरू थर्मोन्यूक्लियर ईन्धनबाट बाहिर निस्केर जाने पनि उनले बताए ।
म्याट क्यापलानले भने– ‘अन्तरिक्षमा सूर्यको चमक हराउनेछ र सूर्यको साथसँगै शीतलता आउनेछ र त्यसपछि उसको उज्यालोले पनि काम गर्न थाल्नेछ। यससँग पृथ्वीको अन्त्य हुनेछ। सूर्य ताप्न थाल्दा पृथ्वीमा सबै चीज चिसो हुनेछ।
सम्पूर्ण पृथ्वी आइस लेयरले ढाकिएको हुनेछ र यो बरफ जस्तै हुनेछ र मानिसहरूले यसलाई सहन सक्ने छैनन्। यस तरिकाले पृथ्वीको अन्त्य हुनेछ। तर त्यहाँ लामो समय बाँकी छ।’
उनले भने– ‘यो हुन अझै १० देखि ११ हजार बर्ष बाँकी छ। तबसम्म पृथ्वीको अन्त्य हुँदैन। कुनै उल्का पिण्डले यसलाई नष्ट गर्दैन।’
त्याे भन्दा पहिले अप्रिल महिनामा उल्का पिण्डको पतनले संसारको अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरेको थियो। तर त्यो भएन।
कसरी बन्यो त अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा : किन छ शक्तिशाली ?